Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण काठमाडाैँ उपत्यकामा कोरोना समुदायमा फैलिने खतरा !
काठमाडाैँ उपत्यकामा सोमवार थप ८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । कोरोना पुष्टि हुनेहरुमा काठमाडाैँका ६ जना, ललितपुरका १ जना र भक्तपुरमा १ जना छन् । पछिल्लो समय काठमाडाैँ उपत्यकाको घनावस्ती भएका ठाउँहरुमा कोरोना पुष्टि भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले उपत्यकावासीलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । याे खबर नागरिक दैनिकमा छ ।